Nkwenkwezi 13, 2021
Impompi yamafutha ezimota ebisimile ukusetshenziswa ngenxa yama hackers.
Izikliwi zobulembu, amahackers ngesilungu, sezithwalisenzima ilizwe leMelika ngokuthatha ngudlu imininingwane efihlekileyo emitshineni yamakhumputha besezisithi nxa zingaphiwanga imali zizaveza imininingwane le egoqela amanombolo lamakheli ezisebenzi.
Edolobheni le Washington DC izikliwi lezi zangena ebulenjini bogatsha lwamapholisa zathatha amagama amapholisa, amakheli lenombolo zocingo zathi nxa zingabhadalwanga imali eyizigidi ezine zizawahaza ebulenjini.
Sikhuluma nje ilizwe leMelika liphakathi kokusilela kwamafutha ezimota ngemva kokuba izikliwi zobulembu zingene emakhumputheni enkampani ye Keystone eyiyo ephethe impompi yamafutha ezimota avela esigabeni se Texas esiya kundawo ezitshiyeneyo zelizwe.
Kunjalo nje, inani lababanjwa igcikwane le coronavirus liqhubeka lokhu lisehla kwelemelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleMelika, uMnu. Den Moyo ukuze sizwe umumo walapho akhona edolobheni le Reston esigabeni se Virginia.